Inkcazo yesitokhwe yombhobho wensimbi engenasici igqityiwe
Imibhobho yensimbi engenastainless yahlulwe ngokwemibhobho yentsimbi yekhabhoni eqhelekileyo, imibhobho yentsimbi ekumgangatho ophezulu wekhabhoni, imibhobho yolwakhiwo lwealloyi, imibhobho yentsimbi yealloyi, imibhobho yentsimbi ethwele, imibhobho yentsimbi, imibhobho edityanisiweyo yebimetallic, imibhobho eqatywe yaza yatyabeka ukugcina iintsimbi ezixabisekileyo kwaye idibane nezikhethekileyo. iimfuno. Imibhobho yensimbi engenasici ineentlobo ezininzi, ukusetyenziswa okuhlukeneyo, iimfuno ezahlukeneyo zobugcisa kunye neendlela ezahlukeneyo zokuvelisa.
Imibhobho yensimbi engenastainless yahlulwe ngokwemibhobho yentsimbi eqhelekileyo yekhabhoni, imibhobho yentsimbi ekumgangatho ophezulu wekhabhoni, imibhobho yolwakhiwo lwealloyi, imibhobho yentsimbi yealloyi, imibhobho yentsimbi, imibhobho yentsimbi, imibhobho edityanisiweyo yebimetallic, imibhobho eqatywe yaza yatyabeka ukugcina iintsimbi ezixabisekileyo kwaye idibane nokhethekileyo. iimfuno. Imibhobho yensimbi engenasici ineentlobo ezininzi, ukusetyenziswa okuhlukeneyo, iimfuno ezahlukeneyo zobugcisa kunye neendlela ezahlukeneyo zokuvelisa. Okwangoku, uluhlu lwangaphandle lwedayamitha yemibhobho yensimbi yi-0.1-4500mm kunye nobubanzi bodonga yi-0.01-250mm. Ukuze ukwahlula iimpawu zayo, iibhobho zetsimbi zihlala zihlelwa ngokweendlela ezilandelayo.
Umbhobho wentsimbi engatyiwayo unokwahlulwa ube ngumbhobho ongenamthungo kunye nombhobho odityanisiweyo ngokwendlela yokuvelisa. Umbhobho wentsimbi ongenamthungo unokwahlulwa ube ngumbhobho oqengqelekayo oshushu, umbhobho oqengqelekayo obandayo, umbhobho otsalwa ngokubanda kunye nombhobho okhutshiweyo. Umzobo obandayo kunye ne-cold rolling yinkqubo yesibini yepayipi yensimbi; Umbhobho odityanisiweyo wahlulwe waba ngumbhobho odityanisiweyo othe ngqo kunye nombhobho odityanisiweyo.
Umbhobho wensimbi engenasici unokwahlulwa ube ngumbhobho ojikelezileyo kunye nombhobho okhethekileyo ngokwemilo yecandelo. Iityhubhu ezikhethekileyo ezimile zibandakanya iityhubhu ezixande, iityhubhu zerhombic, iityhubhu zeelliptical, hexagonal tubes, octagonal tubes kunye ne-cross-section asymmetric tubes. Umbhobho okhethekileyo owenziweyo usetyenziswa ngokubanzi kwiindawo ezahlukeneyo zesakhiwo, izixhobo kunye namacandelo omatshini. Xa kuthelekiswa nombhobho ojikelezayo, umbhobho owenziwe ngokukhethekileyo unomzuzu omkhulu we-inertia kunye ne-modulus yecandelo, kwaye unokugoba okukhulu kunye nokumelana nokuxhatshazwa, okunokunciphisa kakhulu ubunzima besakhiwo kunye nokugcina intsimbi.
Umbhobho wensimbi engenasici unokwahlulwa ube ngumbhobho wecandelo elilinganayo kunye nombhobho wecandelo eliguquguqukayo ngokwemilo yeprofayili. Imibhobho yecandelo eliguquguqukayo libandakanya imibhobho ekhonkoni, imibhobho enyathelweyo kunye nemibhobho yecandelo lexesha.
Imilo yokuphela kombhobho
Umbhobho wensimbi engenasici unokwahlulwa ube ngumbhobho ogudileyo kunye nentambo yombhobho (umbhobho wentsimbi enemisonto) ngokwemeko yokuphela kombhobho. Umbhobho wokuthunga unokwahlulwa ube ngumbhobho wokuthunga oqhelekileyo (umbhobho wokuhambisa uxinzelelo oluphantsi olufana namanzi kunye negesi, edityaniswe ngumbhobho oqhelekileyo okanye intambo yombhobho weconical) kunye nombhobho okhethekileyo (umbhobho wepetroleum kunye nokugrumba ijoloji, edityaniswe ngokukhethekileyo. intambo yombhobho wokuthunga obalulekileyo). Kweminye imibhobho ekhethekileyo, ukwenzela ukuba kwenziwe impembelelo yomsonto ngamandla okuphela kombhobho, ukutyeba kombhobho (ukuqina kwangaphakathi Ukuqina kwangaphandle okanye ukutyeba kwangaphakathi nangaphandle).
Ngokwenjongo, inokohlulwa ibe ngumbhobho we-oyile yequla (i-casing, i-oyile ye-oyile kunye ne-drill pipe), umbhobho wepayipi, umbhobho webhoyila, umbhobho wesakhiwo somatshini, umbhobho we-hydraulic prop, umbhobho we-cylinder wegesi, umbhobho wejoloji, umbhobho wekhemikhali (uxinzelelo oluphezulu. umbhobho wesichumiso, umbhobho oqhekezayo wepetroliyamu) kunye nombhobho wolwandle.
Inkqubo yokuvelisa intsimbi engenastainless umbhobho welding:
Imathiriyeli ekrwada -- ukucandwa komcu -- ukwenziwa kwemibhobho edityanisiweyo -- ukulungiswa kwesiphelo -- ukupolishwa -- Ukuhlolwa (ukutshizwa ngokutshizwa) -- Ukupakishwa -- ukuhanjiswa (ukugcinwa kwempahla) (umbhobho wokuhombisa odityanisiweyo).
Imathiriyeli ekrwada -- ukwahlulwa komcu -- ukwenziwa kombhobho odityanisiweyo -- unyango lobushushu -- Ukulungiswa -- ukulungiswa -- ukulungiswa kwesiphelo -- pickling -- Uvavanyo lweHydrostatic -- Ukuhlolwa (ukutshizwa kokutshizwa) - ukupakishwa -- ukuhanjiswa (ukugcinwa kwezinto) (imibhobho ye umbhobho odityanisiweyo wemibhobho yoshishino).
Ngaphambili: Isampulu yasimahla ye-20 # ye-oyile iSeamless Steel Pipe-indawo yokuthengiswa kwe-40Cr yentsimbi yombhobho wokusetyenzwa-Weichuan
Okulandelayo: Iityhubhu zesikwere ezilungiselelweyo ezineenkcukacha ezahlukeneyo
304 uMbhobho weNtsimbi eNgatyiwayo
304 Imibhobho yeNtsimbi eNgatyiwayo
Imibhobho yeStainless Oval
Ityhubhu yentsimbi engatyiwayo
Tp304Stainless Steel Tube
Tp316Stainless Steel Tube
umbhobho square Galvanized ikumgangatho ophezulu kwaye l ...
Idayimitha enkulu spiral metal umbhobho umenzi
Inani elikhulu labavelisi bemibhobho yentsimbi bathengisa...
I-A106gr.B ingenamthungo yomenzi wemibhobho yentsimbi...
Umenzi we-45# udonga olungqingqwa lombhobho wentsimbi ongenamthungo